राजनीति Archives - Page 116 of 121 -
फोरम नेपालका उपाध्यक्ष युवराज कार्की मोरङ क्षेत्र २ बाट उम्मेदबार
मेरो उम्मेदबारीले नश्लीय खस आर्यको खोक्रो जग हल्लिएको छ– युवराज कार्की मोरङ १६, कात्तिक । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष युवराज कार्कीले मोरङबाट आफ्नो उम्मेदबारी दर्ता गराएका छन् । मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपाध्यक्ष कार्कीले उम्मेदबारी मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । बिहिबार फो...
नेता सिटौलाको मनोनयन दर्ता
आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि झापा जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढीस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुमा उम्मेदवारहरुले उत्साहका साथ आ–आफ्ना मनोनया दर्ता गरिरहेका छन् । आगामी मंसिर २१ हुने सो निर्वाचनका लागि झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा प्रतिनिधि सभाका लागि नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व महामन्त्री ...
काठमाडौं १ मा रवीन्द्र मिश्रको उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं, कात्तिक १६ – विवेकशील साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्रले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ । उहाँले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको हो । यो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसले प्रकाशमान सिंहलाई उम्मेदवार तोकेको छ । यस्तै वाम गठबन्धनले अनिल शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेस र वाम गठबन्धनले उम्मेदवारी...
बिहीबार मनोनयन गर्ने काँग्रेसका उम्मेदवारहरु (सूची सहित)
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसले बिहीकार हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको दोस्रो चरणको निार्वचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरुको नामावली तयार पारेको छ। विहान बसेको काँग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकले बुधबार टुंग्याउन नसकेका निर्वाचन क्षेत्रहरुका उम्मेदवारहरुको नाम टुंगो लगाएको हो। निर्वाचन आयोगले बिहीबारको लागि दोस्र...
संघीय फोरमका पर्सा क्षेत्र १ को ‘क’ बाट– जनत अनसारी
पर्सा १६, कात्तिक । संघिय समाजवादी फोरमका पर्सा जिल्ला नेता जनत अनसारी आगामी २१ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचवमा उठ्ने भएका छन् । पार्टीका स्थानीय स्थापित जनआधार भएका उनी पर्साको क्षेत्र १ 'क' बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारी आज दर्ता...
संघीय फोरमका चर्चित युवा नेता सञ्जय यादव प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्दै
सर्लाही, १५ कात्तिक । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय यादव आगामी २१ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्ने भएका छन् । पार्टीका चर्चित युवा नेतामा गनिने उनी सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र ३ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष उम्...
संघीय फाेरमका शीर्ष नेता काे कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, १५ कात्तिक । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारीहरुमध्ये मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा सात जना नेताहरु मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्ने भएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा सात जना पदाधिकारीहरु मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा...
रौतहट ४ मा एमालेबाट वंशीधर मिश्र‘आउट’तुलसीराज गिरी ‘इन’
काठमाडौं, १५ कात्तिक । प्रदेश नम्बर २ मा एमालेले १३ र माओवादी केन्द्रले १५ सिट पाउने गरी भागबन्डा टुंगो लगाएका छन् । आ–आफ्ना भागमा परेका निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रले आज धमाधम उम्मेदवार छनोट गर्दैछन् । प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत रौतहट २ र ४ को प्रतिनिधिसभातर्फको सिट एमालेकोे भागमा परेको छ । १ र ३ माओवादी...
फोरमका उपाध्यक्ष युवराज कार्की र कांग्रेसका डा रिजाल मोरङ क्षेत्र २मा भिड्दै
मोरङ १३ कात्तिक । मोरङको क्षेत्र नं. २ मा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज कार्कीको नाम तय गरेको जानकारी आएको छ । मोरङको क्षेत्र नं.२ मा सघीय फोरमको यो उम्मेदवारी सगै यो क्षेत्रपनि ‘हेवी वेट’ भिडन्त हुने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाल छन् । वाम गठबन्दनका एमा...
राजपा शीर्ष नेताहरूको क्षेत्र टुंगो लाग्यो,संघीय फोरमको अझै टुंगो लागेको छैन
राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)नेपालका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रको अनौपचारिक टुंगो लागेको छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका ६ जनाको निर्वाचन क्षेत्र टुंगो लागेको तर औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको राजपाका एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्त ठाकुर महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचन लड्ने भएका छन् ...